Praiminisitra Ntsay Christian: “Maka lesona tamin’ny fifidianana ny governemanta” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Maka lesona tamin’ny fifidianana ny governemanta”
Namoaka ny heviny, taorian’ny fahavitan’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly. Niaiky ny tenany fa misy azo tsoahina manoloana izany.
“Tsy maintsy maka lesona ny governemanta amin’ireny trangan-javatra tamin’ny fifidianana ireny. Eo koa ny fanadihadiana ireo tatitra nataon’ireo mpanara-maso fifidianana, na ny avy any ivelany izany na ny avy eto an-toerana.”
Io ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Anosy, omaly, momba ireo trangan-javatra nahatonga fitarainana tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, natao ny 7 novambra lasa teo. Miroso amin’ny zotra famoahana ny voka-pifidianana eo amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) isika amin’izao fotoana izao.
“Ao anatin’izany, efa mandinika sahady izahay ny amin’izay tokony hohatsaraina amin’ny lafin-javatra miankina amin’ny governemanta amin’ny fifidianana”, hoy izy.
Nanampy ny Ceni hatrany ny governemanta
Tsotra ny zava-misy, tao anatin’ny zotram-pifidianana nanomanana iny fihodinana voalohany iny: nandray andraikitra amin’izay fanampiana rehetra azo atao ho an’ny Ceni ny governemanta.
Natao tamin’izany koa ny famelana ny rehetra amin’izay azo atao hahazoana mitondra vahaolana amin’ireo trangan-javatra voalazan’ny kandidà maromaro na izy rehetra momba ny fanomanana ny fifidianana, napetraka teo ambany fitantanan’ny Ceni. Ny Ceni no tomponandraikitra voalohany amin’izay lafin-javatra izay.